Kubatshazwa ukubulawa kwesalukazi ngesihluku - Ilanga News
Home Izindaba Kubatshazwa ukubulawa kwesalukazi ngesihluku
Sibulawe isidumbu saso saphonswa emlilweni
INDLU okushiselwe kuyona isidumbu sikaNkz Geli Mthimkhulu. ISITHOMBE SITHUNYELWE
sesiQUBULE ingebhe emphakathini waseSamu-ngu, eShowe, isigameko sokuhlaselwa kubulawe isalukazi, emuva kwalokho isidumbu saso saphonswa endlini, yathungelwa ngomlilo ngabantu abangaziwa entathakusa yayizolo ngeSonto.
Lize layoshona ilanga layizolo amalungu omphakathi esalokhu ebabaza ngokubulawa kukaNkz Geli Mthimkhulu (69), oshe wangqongqa.
Kuthiwa kayaziwa imbangela yokubulawa kwakhe.
Ikhuluma neLANGA isemzini kamufi induna yendawo, uMnu Siphosenkosi Mthimkhulu, ithe isa-khungathekile ngoba kakukaze kube nesigameko esinje endaweni.
“Siyayiqala lapha endaweni yethu le nto eyenzeke kwaMthimkhulu. Kuyimanje siyabuzana nje ukuthi ngabe bekwenzenjani ngoba akukho okuvelayo, noma abesolwa ngakho umufi.
“Ngisho namaphoyisa ahambe nezinsalela emangele nje ukuthi kungani umuntu omdala ebulawa kabuhlungu kanjena,” kusho yena.
Ngokuthola kweLANGA, kuzwakale uNkz Mthimkhulu ekhala entathakusa yayizolo, ethi kunabantu abamsha-yayo. UMnu Siyabonga Mthimkhulu ozalwa ngumfowabo kamufi, uthi ubesendlini yakhe ngesikhathi ezwa uyisekazi ekhihla isililo, kuzwakala ukuthi kunabantu abamhlaselayo.
“Ngisabe nokuphuma ngoba laba bantu abebemshaya bebekhuluma, futhi kuzwakala ukuthi baningi. Kuthe emuva kwesikhathi, ngezwa sekuthulekile, ngavula isicabha endlini yami ekujana neyakhe, ngaphuma ngabaleka, ngaya kwamakhelwane ngayobabikela ukuthi kwenzekani ekhaya,” kusho yena.
Uthi umfowabo kamufinaye obelele endlini engaphandle uphumile ezwa udadewabo ekhala wayozama ukulamula, ababulali bamshaya bamshiya ezingozingozi ekhanda.
“Ulimele kanzima ekhanda, okuphoqe ukuthi aye esibhedlela ayothungwa. Siyethemba ukuthi amaphoyisa azokwazi ukuthola ukuthi kwenzekeni nokuthi ubabekazi ubulawelweni ngesihluku esingaka engenzanga lutho kumuntu,” kusho yena.
Uthi bebengakaze bezwe noma kuthiwa kukhona abamsola ngokuthakatha njengoba kwaziwa ukuthi kwezinye izindawo abantu abakhulile bayabulawa, besolwa ngokuhambahamba.
“Njengomndeni, sithukile nje ukuthi noma sebembulele bese bemphosa emlilweni sengathi babulala
isi-lwane, nokuthi yini lena engaka abebembulalela yona,” kusho yena.
Elinye ilungu lomphakathi elicele ukungadalulwa, lithe ngabe liqamba amanga uma lingathi kukhona elake lakuzwa ngomufi elimchaze njengomuntu obezihlalela kwakhe futhi akekho nomuntu ake waxabana naye ezinsukwini.
“Ngeke sazi-ke phela ukuthi labo abebemhlasele bazini lena thina esingayazi, kodwa nje akuyena umuntu esimazela okubi.
“Kuyasixaka ukuthi isalukazi esiziphilela ngempesheni sibulawe kabuhlungu kanjena.
“Siyethemba ukuthi kuzogcina kutholakele ukuthi kwenzekeni ngoba nathi sesiyesaba phela uma sekunezigangi ezibulala abantu abadala,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa ayaphenya ngalesi sigameko kanti imbangela yaso kayikatholakali.
Previous articleImeya ibalisa ngemali “eyathenjiswa uMasipala”
Next articleUsuthembele kuNkulunkulu umndeni kaMgilitsha